Ma Saxba in Saddex qalad oo uu Abiy Ahmed ku sammaynayo deegaanka Soomaalida? – Xeernews24
Ma Saxba in Saddex qalad oo uu Abiy Ahmed ku sammaynayo deegaanka Soomaalida?
25. August 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiya Axmed ayaa tan iyo intii uu yimid hogaanka Itoobiya ugaystay deegaanka Soomaalida dhibaato xoog leh oo aan ka dhicin deegaanada Itoobiya.
Abiy Axmed wuxuu kula dhaqmay deegaanka Soomaalida nidaam ka kuwan kan lagula dhaqmo deegaanada Itoobiya, ee ah dastuurka u yaal dalka;
a) xubnaha xisbiga waa la handaday oo la bah-dilay, qaar badan ayaa xisbiga laga caydhiyey, gudoomiye cusub ayaa loo sameeyey,
b) waxaa kale oo si sharci daro ah Addis Ababa loogu yeedhay dhamaan xubihii maamul ee gabalada iyo dagmooyinka, kuwaas oo la filayo in qaar ka mid ah la caydhin doono,
d) waxaa si sharci daro ah oo aan wali uga dhicin deegaanka Soomaalida iyo kuwa kale ee Itoobiya madaxwayne looga dhigo qof aan ahayn xubin xisbi iyo xubin baarlamaan midna.
Aniga iyo hankayga Soomaaliga ah, ee aan ahayn hanka kuwa Soomaalida ah ee Addis Ababa looga yeedhay; wuxuu ahaa in Abiy Axmed yimaado magaalada Jijiga, kana tacsiyeeyo, wixii ka dhacay dhib deegaanka Soomaalida ee ay masuulka ka ahaayeen isaga Abiy Axmed iyo Cabdi Maxamuud Cumar.
In kasta oo madaxwaynaha cusub ee deegaanka Soomaalida Musfate Cagjar shalay bixiyey talooyin fiican oo sida aan filayo fariin u ahaa dadka kulanka ka qayb galaya. Maxaa afkaar, talo iyo su,aalo ah oo laga filan karaa in ay kula xaajoodaan Abiy Axmed Raysal wasaaraha Itoobiya dadka Soomaaliyeed ee uu maanta Addis Ababa Shirka ugu qabanayo; a) waxaan filiyaa in wax wanaag u ah dadka Soomaaliyeed oo Itoobiya ka nixin kara in aan goobta laga odhan doonin. b) Dimoqraatiyada ka hirgashay Itoobiya waanu ku faraxsanahay, waanan la shaqayn doonaa Abiy Axmed iyo dawladiisa, hadalo noocaas ah. c) kala dacwood beelaha Soomaaliyeed dhaxdood ah oo ah mida uu u jecel yahay Abiy Axmed iyo Itoobiyaba. d) waxaa dhici karta in qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaan ahaan deegaanada Oromada dhib wayna loo gaystay in ay su,aal waydiiyaan uuna jeclaysan Abiya Axmed.
W/Q: Raas Ahmed
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/1-3.png 394 698 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-25 08:20:452018-08-25 08:20:45Ma Saxba in Saddex qalad oo uu Abiy Ahmed ku sammaynayo deegaanka Soomaalida?
Khasaaro intee la’eg ayaa ka dhashay Qaraxii cuslaa ee lala eegtay ciidamada... Xogo Qarsoonaa oo laga Helay Wasiiradii Kililka 5aad Ee Hargeysa Lagu Qabta...